Shiinaha Filimku wuxuu wajihi jiray Soo-saare Plywood iyo Badeecad | Roc
ROCPLEX Film Faced Plywood waa plywood tayo sare leh oo tayo sare leh oo lagu daboolay filimka milixda loo yaqaan 'phenolic resin-treatment' oo isu badalaya filim difaac ah inta waxsoosaarka la sameynayo.
Wuxuu la yimaadaa dusha siman ama mesh.
Geesaha waxaa lagu shaabadeeyey rinjiga acrylic-biyo-faafi kara.
Nooca plywood-ka waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha dhismaha iyo soosaarida dhulka. Way fududahay in la fuulo lana isticmaalo.
Filimka ROCPLEX wuxuu la kulmay plywood xoog, xasiloon, qaab dhismeed la taaban karo
ROCPLEX filim waxay la kulantay plywood - Upscale
Isku Xidhnaanta Qality
Ugu badnaan: 1.68 Min: 0.81
Laabashada Moudulus ee Dabacsanaanta
Qiyaastii 15-25 ku celcelin Isticmaalka Times Acoording to Mashaariicda Foomka Codsiga
ROCPLEX filim wuxuu la kulmay plywood - Midscale
Ugu badnaan: 1.59 Min: 0.79
Qiyaastii 12-20 oo ku celcelin ah Isticmaalka Times Acoording To Mashaariicda Foomka Codsiga
Filimka ROCPLEX wuxuu la kulmay plywood - Dhaqaale
Ugu badnaan: 1.40 Min: 0.70
Qiyaastii 9-15 oo ku celcelin ah Isticmaalka Times Acoording to Mashaariicda Codsiga Foomka
ROCPLEX Film Fududeeyaha Plywood
■ Haddii lagu shubo biyo karkaraya muddo 48 saacadood ah, weli waa mid xabag ku dhegan oo aan cillad lahayn.
Mood Dareenka jirka wuu ka fiican yahay wasakhda birta waana qancin karaa shuruudaha sameynta caaryada, kuwa birta ah way fududahay in la rogo oo si dhib yar ma awoodo ka soo kabsato jilicsanaanta xitaa ka dib hagaajinta.
■ Yaraynta kharashka oo laga fogaado qasaarooyinka (si daxad ah iyo Erosive of ebu caarada) ROCPLEX film wajahay plywood.
■ Wuxuu xalliyaa dhibaatooyinka daadashada iyo dusha sare ee dusha xilliga dhismaha.
Gaar ahaan ku habboon waraabinta mashruuca shubka, wuxuu samayn karaa shubka dusha sare oo siman
■ Ogaanshaha macaash dhaqaale oo sareeya.
ROCPLEX Filim Soo Wajahday Plywood Badbaad waqtiga, shaqada iyo kharashka
ROCPLEX Film wuxuu lakulmay plywood Keydso kharashka
ROCPLEX Film wuxuu wajahay plywood Shorten duration
ROCPLEX Film waxay la kulantay plywood tayo sare leh shubista
ROCPLEX Filim Soo Wajahday Plywood Padking Iyo Rarid
Dhanka kale waxaan sidoo kale kuu soo bandhigi karnaa qalabyada systerm-ka qaab-dhismeedka, plywood-ka ganacsiga, filimka soo wajahay plywood iwm.
Waxaan si gaar ah xirfad ugu leenahay keenista plywood-ka.
Fadlan la xiriir kooxdayada iibka si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan filimka Shiinaha ee loo yaqaan 'plywood'.
Hore: Maqaarka Albaabka
Xiga: HPL Guddi Dabka Ka Difaaca